Ungave sei wekuzvarwa muKubernetes? naMarkus Eisele | Linux Vakapindwa muropa
Kubernetes chirongwa chikuru inozivikanwa kune vese, kunyanya kune containerized kuisirwa app uye manejimendi. Uye Markus Eisele, Red Hat's EMEA Developer Adoption Lead, ine zvimwe zvakakosha kune chero munhu anofarira kudzidza nezvazvo.
Uye ndezvekuti kusimudzira bhizinesi kwagara kuri rimwe rematambudziko makuru ekugadzirwa kwecomputer, uye kunyanya kwe makambani akaita seRed Hat. Ndokusaka mumakore gumi apfuura isu takatama kubva kune yakasarudzika 3-tier dhizaini kuenda kune yekuvaka mapurani ane akanyanya kugoverwa microservices kuzadzisa zvingangove zvisina muganho zviwanikwa zviwanikwa zveveruzhinji gore rinopa. Uye zvakare, aya microservices anogona kuve akasarudzika mune chaiwo uye akareruka mabasa, achienzaniswa neasina kushanda rinorema maapplication maseva.
Izvi microservices zvinoreva kushanda zviri nani maererano nezviwanikwa zvakadyiwa, unova mumwe mukana wakakura. Uye zvakare, ndiyo imwe yedzakanakisa nzira dzekuendesa aya maapplication kuburikidza nemidziyo, sekunge madiki chaiwo michina vakabatwa. Kunyangwe mutsauko mukuru pakati peVM nemudziyo ndewekuti wekutanga hauna sisitimu yekushandisa, pachinzvimbo inomhanya munzvimbo yemushandisi yeiyo inomiririra sisitimu inoshanda kernel, sekunge yaive app. Izvi zvinoreva zvakare kuchengetedzeka.
Asi hazvisi zvese zvaizove zvinobatsira, nekuti kuvakwa uku kunoda midziyo yakawanda (imwe pasevhisi kana zvimwe), zvinoreva kuti nzira yavanotarisirwa uye kurongedzwa nayo ingave yakaoma uye inomiririra kuyedza kukuru kune manejimendi wehurongwa. Apa ndipo apo Kubernetes inopinda munzvimbo uye zvinoita kuti zvese zvive nyore.
1 Kugadzira nharaunda nharaunda muKubernetes
2 Hardware yekumusoro Kubernetes kumisikidzwa
2.1 Kugamuchirwa kwevaNative muKubernetes inyika yakasiyana
Kugadzira nharaunda nharaunda muKubernetes
Kubernetes inoita kuti hupenyu huve nyore kune manejimendi, zvichigonesa imwe otomatiki manejimendi emaapps uye masevhisi. Kutsvaga fananidzo, zvingaite kunge chiremera chechiteshi pane jetty, iyo inoita kuti ngarava dzifambe panguva imwe chete muchadenga. Mune mamwe mazwi, pakutanga, kugona kweKubernetes kunogona kufananidzwa neiyo yeJava EE, nekuti ese ari maviri anomhanyisa maapps pane akaparadzirwa epanyama zvigadzirwa. Nekudaro, midziyo haina hanya zvishoma nezve izvo zvinodiwa neapp pachayo.
NaKubernetes unogona kumisikidza sumbu nekunyora mafaira ekumisikidza ku mavara fomati (kunyanya YAML, kunyangwe ichitsigirawo JSON). Mukati michave nemipimo kana kudomwa kwechinhu chimwe nechimwe chakatsanangurwa manejimendi.
Hardware yekumusoro Kubernetes kumisikidzwa
Kuti utore mukana weiyo yakakwirira scalability uye rakavimbika yakapihwa nesumbu reKubernetes, vanogadzira uye manejimendi vanofanirwa kutarisira kupa mudziyo nemidziyo yakakwana yekumhanyisa.
Kana sumbu inofungidzirwa kuve nemaviri tenzi maodhi ane 2 GB ye RAM, 4 cores, uye 2 vashandi maodhi ane 1 GB ye RAM uye maviri macores, ipapo Sumbu reKubernetes iwe uchazoda 6 GB ye RAM uye gumi nemaviri cores sepadiki. Zvimwe zviwanikwa izvo hazvisi zvese desktop zvemakomputa zvinogona kupa, kunyange chiri chokwadi kuti chirongwa ichi hachina kuitirwa desktop.
Nekudaro, parizvino pane huwandu hwe nharaunda diki dzekudzidza iyo inogonesa vanogadzira kukura neKubernetes munzvimbo dzemuno. Mienzaniso yadzo ndeye MiniKube, MicroK8s, OpenShift CodeReady Cointainers, nezvimwe. Ose iwo masumbu e1 single node yekugona kuva nawo muPC yedesktop uye kuiswa kwayo kunogona kuitwa mumaminetsi mashoma.
Kuedza a yakanyanya kuoma nharaunda sevhisi, iwe unowanzo fanirwa kuenda kune yechokwadi Kubernetes sumbu. Asi chishandiso Code Yakagadzirira Midziyo inogona kuita kuti hupenyu hwemusimudziri huve nyore, kusanganisira iro rese iro rekushandisa uye imwechete-node kuisirwa kweKubernetes sumbu.
Kugamuchirwa kwevaNative muKubernetes inyika yakasiyana
Kubernetes yauya kuzoshandura ruzivo rwese rwevagadziri, vanoona nzira yekugadzirisa masevhisi aya akasiyana zvachose uye akabatanidzwa. Nekuda kweizvozvo, Kubernetes kugamuchirwa kwave danho rinotevera rine musoro yakanangana nekurerutsa kwemugadziri.
Saizvozvo, Kubernetes inogonesa kuchinja kukuru, nerubatsiro uye maturusi ekubudirira kweKubernetes, pamwe nematambudziko matsva ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Ungave sei wekuzvarwa muKubernetes? naMarkus Eisele